Madaxweyne Xassan oo Kulamo la qaadan doono Madaxda G8 ka. – SBC
Madaxweyne Xassan oo Kulamo la qaadan doono Madaxda G8 ka.
Posted by Webmaster on June 14, 2013 Comments
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Sh. Maxamud uu wehliyo Wasiirka Maaliyadda Mudane Maxamud Xassan Suleyman ayaa maanta kasoo degay London halkaasna kulamo kula qaadan doono Madax ka tirsan G8ka. Sanadkan ayaa shirka G8ka looga hadli doonaa “Ganacsiga, Canshuuraha iyo maamul wanaaga”.
Safarkaan ayuu Madaxweyne Xassan ku guubaabin doonaa dalalka G8ka in ay Soomaaliya la ganacsadaan oo ay maal gelin ku sameeyaan taas oo door weyn ka cayaari doonto sidii Soomaaliya ay nabadda ugu soo noqon laheyd. Sidoo kale wuxuu ku wargelin doonaa in hada dalku u furan yahay gancsi iyo wada shaqeyn.
Madaxweyne Xassan ayaa wuxuu la kulmi doonaa Raisul Wasaaraha Ingiriiska oo ay ka go’an tahay in uu taageero dowladda Soomaaliya. Ingiriiska ayaa safaaradiisii hore Magaaladda Muqdisho dib-uga furay labaatan sanno ka dib.
“Soomaaliaya waxey ku taalaa meel muhiim u ah caalmka oo dhan. Waa dal qani ah oo leh kheyraadka dabiiciga ah oo ku wanaagsan ganacsi iyo maal gashi. Maanta aduunka oo dhan diyaar buu noo yahay. Waxaan ku boorinayaa dhamaan raga iyo dumarka Soomaaliyeed in aan ka faa’ideysano fursadaan qaaliga ah.” Saa waxaa yiri Madaxweyne Xassan
Ugu danbeyntii ayuu ku soo gaba-gabeeyay in shaqo loo abuuro dhalinyaradda waxey ka mid tahay qaabka looga hortagi karo burcad badeeda iyo argagixisadda. Dhalinyaradda in shaqo loo abuuro waxey muhiim u tahay nabadda iyo horumarka Soomaaliya.